Xoogaga Tigreyga oo caawa garaacay Caasimadda Eritrea ee Asmara – AfmoNews
Xoogaga Tigreyga oo caawa garaacay Caasimadda Eritrea ee Asmara
Xoogaga Tigreyga Itoobiya ayaa caawa gantaalo ku garaacay Magaalada Asmara ee Xarunta Wadanka Eritrea.
Shacabka ku dhaqan Magaalada Asmara ayaa sheegay inay caawa maqleen wax ay ku sheegeen qaraxyo waaweyn, oo baqdin ku dhaliyay dadka deegaanka.
Shacabka ayaa qaarkood iyagoo guryahooda ku sugan waxay sheegeen inaanay fasiraad dhab ah ka bixin karin waxa caawa ka socda Asmara. Gabar degan Caasimadda Asmara ayaa barteeda xiriirka dadweynaha waxay ku soo qortay inay maqashay illaa saddex jug oo aad u waaweyn.
Inkastoo Dowladda Eritrea aanay ka hadlin waxa caawa ka dhacay Asmara ayaa waxay hadana warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in la bartilmaameedsaday Xarunta Wasaaradda Warfaafinta iyo Garoonka Asmara.
Maanta ayay ahayd markii Tigreyga ay ku hanjabeen inay beegsadan doonaan Eritrea, haddii aanay markaasi joojin ku garab istaagga dagaalka ee Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed.
Getachew Reda, Afhayeenka Maamulka Tigreyga ayaa ku goodiyay inay bartilmaameedsan doonaan dalka ay deriska yihiin ay Eritrea, haddii aanu markaasi faraha kala bixin xiisadda ka oogan Waqooyiga Itoobiya.
Afhayeenka ayaa carabka ku adkeeyay inay beegsan doonaan goob kasta, oo ay ka soo duulaan diyaaradaha dagaalka Itoobiya, ee duqeymaha ka wada dhulka Tigreyga, isagoona soo hadalqaaday duqeymihii ay Jimcihii ka gaysteen garoomada ku yaala gobolka ay deriska yihiin ee Amxaarada.
“Ciidamada Tigreygu waxay gantaalo ku garaaceen garoomada diyaaradaha ee Bahirdar iyo Gonder, waxayna khasaaro aad u weyn u gaysteen Garoonka Bahidar, gaar ahaan dhabaha ay diyaaradaha ka duulaan ama ka soo daggaan. Duqeyntaasi waxaa jawaab looga dhigayay duqeymaha ay diyaaradaha dagaalka ee Xukuumadda Abiy, ee ka soo duula garoomadaasi ay u gaystaan shacabka Tigreyga. Duqeymaha noocaanoo kala ahna way sii socon doonaan, illaa ay diyaaradaha dagaalka ee Dowladda Federaalka ka joojinayaan duqeymaha is daba-joogga ah, ee ay ka wadaan deegaanka Tigreyga.” Ayuu yiri Afhayeenka oo la hadlay Telefishinka Tigreyga.
Xukuumadda Asmara ayaa marar badan beenisay inay ku lug leedahay dagaalka, ha yeeshee weerarka caawa ka dhacay Caasimadda Asmara ayaan meesha ka saari doonin inay si toos ah ugu lug yeelato dagaalka.
Nagaal soo xiriir dhacdo@gmail.com
WARKA SUBAX 8:00 AM (06-03-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
AFRICOM oo warbixin ka soo saartay khasaaraha rayidka ka soo gaaray weeraradeeda Soomaaliya – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia